China ABS Plastic-Function Five-Function Hand Shower Venzi & Suppliers-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawa yesandla > ABS Plastic-Ezintlanu-Function Hand Shower
Thenga i-ABS Plastic ye-Five-Umsebenzi Hand Shower evela kwabavelisi baseTshayina
sibonelela ngeplastiki ye-ABS ye-Five-Umsebenzi Hand Shower ekumgangatho ophezulu wechrome eneWaranti yeminyaka emi-2. Sizibophelele kwimpahla yococeko iminyaka eyi-10, kwaye abathengi bethu babekwe kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Sijonge phambili ekubeni liqabane lakho lexesha elide eTshayina.
I-ABS yeplastiki ye-Five-Umsebenzi Hand Shower
I-ABS yeplastiki ye-Five-Umsebenzi Hand Shower, ilungele zonke iintlobo zamagumbi okuhlambela, kungakhathaliseki ukuba sekhaya, iihotele ezikhawulezayo, okanye ezinye iindawo zifuna izixhobo zokuhlambela.
Iplastiki ye-ABS ye-Five-Umsebenzi Hand Shower Entsha ye-ABS yeplastiki, engeyotyhefu, ukuxhathisa okulungileyo, ukumelana nobushushu obuphezulu, ubungqina obuhle bokudubula.
Uhlengahlengiso lwesantya esinesantya esine-multi-function, flip ngobunono i-paddle gear, tshintsha iindlela ezahlukeneyo ngokuthanda.
Ubungakanani bojongano olusemgangathweni lwamazwe ngamazwe.
Iifayile ezishisayo: I-ABS Plastic ye-Five-Function Hand Shower, abavelisi, iholeyili, iTshayina, ixabiso, iFactory, ababoneleli